Fahatsiarovana an’i Aimé Césaire · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2021 4:22 GMT
Maty tamin'ny 17 aprily 2008 teo amin'ny faha-94 taonany i Aimé Césaire, poeta, Martinikey, mpanao politika ary Karaibeana mafana fo. Matetika tsy dia mahay miaraka firy loatra ny politika sy ny tononkalo kanefa manome tany lonaka roa ho azy ireo i Karaiba rehefa mitranga izany. Nampifangaro ny fitiavany ny fiteny, ny hevitra ary ny fanoratana tao amin'ny fiainany politika, izay naharitra efa ho enimpolo taona i Aimé Césaire.
Tahaka ireo manam-pahaizana Karaibeana maro tamin'ny androny dia liana tamin'ny famerenana ny famaritana ny mombamomba ny mari-panindroana mainty hoditra ao aminy sy ny an'ireo rahalahiny manoloana ny fiheveran-dison'ny fanjanahan-tany izy. Nahasarika azy ny Firaisana Sovietika ho maodely hafa amin'ny fandrosoan'ny olombelona. Toa nandiso fanantenana azy kaomonisma saingy nijanona ho hentitra tamin'ny fanoherana ny fanjanahan-tany izy.
Bilaogera maro no nanome voninahitra azy tamin'ny ohabolana na sombiny avy amin'ny sanganasany. Tany Martinika, namoaka sombiny avy amin'ny Cahier d'un retour au pays natal ny le blog de [moi]. Tao Trinité, nanonona andalana iray tamin'ny tononkalo Mémorandum de ma Martinique i Nicholas Laughlin raha tany Antilles kosa dia namoaka sombiny iray avy amin'ny Lost Body ny bilaogin'ny The Caribbean Review of Books.
Nanoratra i Cap 21 Outre-Mer fa i Césaire no “olomangan'ny vahoaka iray manontolo tamin'ny fikatsahany hamantatra mari-panondroana azy taorian'ny fanjanahantany izay tsy ho fahatsiarovana fotsiny ihany ho an'ny tononkalony, fa ho an'ny fanoloran-tenany ara-politika ihany koa.
Nanoratra lahatsoratra maro ho fanomezam-boninahitra an'i Césaire ilay bilaogera Senegaley Souleymane Dieye ary nandefa ny sarin'ilay poeta an-tserasera nandritra ny fitsidihany an'i Senegal.
Tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Césaire ilay malalantsika” i Souleymane Dieye nanoratra hoe “Lehilahy mahatalanjona ilay dada poeta. Be voninahitra Izy. Lehilahin'ny vahoaka namerina ny fahamendrehan'i Martinika… ”. Nanonona an'ilay mpanoratra sady filozofa Senegaley Hamidou Dia izy, izay nilaza tamin'ny fampitam-baovao fa “Aimé Césaire no namerina ny reharehantsika ho Afrikana”.
Tany Congo-Kinshasa, nanoratra i Forum Réalisance:
Samy nanome voninahitra azy ireo bilaogera Amerikana Pierre Joris sy Matthew Cheney:
Tany am-piandohan'ity herinandro ity tany Togo, nanontany tena ilay mpanoratra Kangi Alem raha niparitaka nanerana an'izao tontolo izao ny vaovao momba ny fampidirana hopitaly an'i Aimé Césaire sy ny faharatsian'ny fahasalamana, hoe ahoana no mety atao hanomezam-boninahitra ity lehilahy manana ny lazany ity. Tsy manohana ny hevitry ny mpanao politika Frantsay sasany i Kangi Alem amin'ny fanaterana an'i Cesaire any Panthéon (toerana hilevenan'ny mainty hoditra malaza hafa.)
Nisafidy sombiny avy amin'ny Ny voina nahazo ny Mpanjaka Christophe i Kangi Alem, tantara an-tsehatra nataon'i Césaire momba ny mpitarika revolisionera Haisiana izay nanambara ny tenany ho mpanjakan'i Haiti tamin'ny taona 1811 ary nanangana rafitra feodaly tao amin'ny firenena. Nilalao tamin'ity sanganasa ity tao amin'ny Fetiben'i Avignon i Kangi Alem.
Nanoratra i Racisme et Histoire: Le Tabou:
Nandefa sary miaraka amin'ny teny telo ny Caribbean Free Radio: